नेपाल लाइभ बिहिबार, साउन ३०, २०७६, १६:१५:००
काठमाडौं- काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका प्रमुख सहरबाट हरेक दिन दर्जनभन्दा बढी मोटरसाइकल चोरी हुने गरेका छन्। चोरको 'टार्गेट'मा नयाँ लटका मोटरसाइकल पर्छन्।
यसरी चोरी भएकामध्ये केही मोटरसाइकल प्रहरीले फेला पारे पनि अधिकांशजसो गायब हुन्छन्। आखिर कहाँ पुग्छन् त चोरीका मोटरसाइकल?
यही रहस्यमयी प्रश्नको उत्तर खोज्न अनुसन्धानमा जुटेको प्रहरीले नयाँ तथ्य फेला पारेको छ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भिक्टिम सपोर्ट युनिट (भिएसयु) ले केही दिनअघि चोरीको मोटरसाइकलसहित 'मिलन' भनिने धनबहादुर योन्जनसहित ३ जनालाई चितवनबाट पक्राउ गरेको थियो।
मिलनबाटै महत्वपूर्ण 'क्लु' पाएको प्रहरी चोरीका मोटरसाइकलको शोरुम सञ्चालन गर्ने गिरोहसम्म पुग्न सफल भएको छ।
महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखा र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको भिएसयुको संयुक्त टोलीले मिलनकै बयानका आधारमा चितवनका 'दीपु' भनिने दीपेन्द्रकुमार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रवक्ता रवि पौडेलले बताए।
काठमाडौंबाट चोरी भएका धेरैजसो मोटरसाइकल उनै दीपुले चितवनमा खरिद गरेर बेच्दै आएका थिए।
चितवनको रत्ननगर नगरपालिका–१३, जयमंगलामा न्यु मनकामना रिकन्डिसन, जगतपुरमा मोटरसाइकलका पार्टस्‌हरु, नारायणगढमा शोरुम सञ्चालन गरेर बसेका व्यक्ति हुन्, दीपु। प्रहरी स्रोतका अनुसार उनले काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न ठाउँबाट चोरी भएर चितवन पुगेका मोटरसाइकल खरिद गरेरै यसरी शोरुम सञ्चालन गरेको खुल्न आएको छ।
४ दिनको रेकीपछि पक्राउ
मिलन पक्राउ परेपछि उनैको बयानका आधारमा प्रहरी दीपुसम्म पुगेको थियो।
चोरीको मोटरसाइकलका 'बादशाह' भनेर चिनिएका उनलाई अहिलेसम्म चोरी केसमा पक्राउ गर्न सकिएको थिएन। ललितपुर जिल्लामा हराएका धेरै मोटरसाइकलमा उनको संलग्नता भएको थाहा पाएपछि प्रहरीले जिल्ला अदालत ललितपुरबाट दीपुविरुद्ध पक्राउ पुर्जी लिएको थियो। त्यसपछि भिएसयुबाट सईको कमान्डमा ४ जना र अपराध महाशाखाबाट २ जना गरी ६ जनाको टोली केही दिनअघि चितवन हान्निएको थियो।
प्रहरी समात्न आउँदै गरेको भन्ने सूचना पाएपछि दीपु मोबाइल अफ गरेर फरार भएका थिए। विशेष सूचनाका आधारमा उनी नवलपरासी पूर्व पुगेको थाहा पाएपछि प्रहरी नवलपुर पुगेको थियो। बा १६च ३१२१ नम्बरको स्कर्पियोमा सवार उनलाई प्रहरीले नवलपुरबाटै पक्राउ गर्न सफल भयो। पक्राउ परेका उनलाई महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर राखेर चोरी मुद्दामा अनुसन्धान अघि बढाइएको छ।
२० मिनेटमै खोलेर यसरी हुन्छ बिक्री
दीपुले २० वर्षदेखि मोटरसाइकल रिकन्डिसन हाउस सञ्चालन गर्दै आएका छन्। चोरी भएर चितवन पुगेका मोटरसाइकल उनैकहाँ पुग्छ। उनले मोटरसाइकल हेरेर ५०/६० हजार रुपैयाँसम्म दिएर किन्ने गरेका छन्। योसँगै उनले चोरी नभएकै पुराना मोटरसाइकल पनि वैधानिक रुपमा किन्छन्।
यसरी उनले वैधानिक रुपमा किन्ने मोटरसाइकल प्रायः नारायणी अञ्चलभन्दा बाहिरी अञ्चलका हुन्छन्। ती मोटरसाइकललाई उनले अञ्चलीकरण गरी नारायणीको पछिल्लो लटको बनाउँछन्। तर, मिलेमतोमा अञ्चलीकरण गर्दा उनको ब्लु-बुकमा अञ्चलीकरण भनेर लेखेको नपाइएको अनुसन्धानमा संलग्न एक प्रहरी अधिकारीले बताए।
त्यसपछि उनले चोरीका नयाँ मोटरसाइकल किन्छन्। अञ्चलीकरण गरेर नयाँ लटको बनाइएका थोत्रा मोटरसाइकलमा चोरीका नयाँ मोटरसाइलको सामान खोलखाल गरेर जोड्छन्। ‘२० मिनेटभित्र यसरी खोलखाल गरेर जोड्न यिनीहरु सिपालु छन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि बाँकी रहेको चोरीको मोटरसाइकलको च्यासिस नम्बरसमेत गालेर कवाडीलाई बेच्छन्। अनि चोरीको भन्ने थाहै हुँदैन।’
यति गरिसकेपछि ५०/६० हजारमा किनेका चोरीका मोटरसाइकल उनले डेढ लाखदेखि २ लाख रुपैयाँसम्म बेच्दै आएका छन्।
दीपु स्वयंले समेत चढ्ने गरेको एक स्कुटर चोरीको भएको अनुसन्धानबाट खुलेको छ। उनले सन् २००३ को लटको पुरानो स्कुटरलाई २०१९ को बनाएर चलाएको पाइएको हो।
पक्राउका लागि चितवन प्रहरीले अहिलेसम्म चासो नराखेपछि काठमाडौंदेखि विशेष टोली नै चितवन पुग्नुपरेको थियो।
यसबारे चितवनका एसपी दानबहादुर मल्लले भने प्रमाण नपुगेर पक्राउ नगरिएको प्रतिक्रिया दिए। आफूहरुकै सहयोगमा माथिल्लो निकायबाट आएको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको उनले दाबी गरे। स्थानीय प्रहरीदेखि माथिल्लो निकायको उच्च प्रहरी अधिकृतसम्म राम्रो सम्बन्ध भएकाले दीपु यतिन्जेल पक्राउ पर्न सकेका थिएनन्।
त्यस्तै, झन्डै ५ महिनाअघि उनको पसलमा राजस्व अनुसन्धान विभाग सहितको टोलीले छापा मारेको थियो। त्यसबेला राजस्व अनुसन्धान विभागले उनलाई ५ लाख ५१ हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेको थियो।
पूर्व-माओवादीको साथ, दुःख नदिन भन्दै गृहको पत्र!
पूर्व माओवादीका नेताहरुसँग पनि दीपुको राम्रो सम्बन्ध छ। उनले चितवनको शक्तिखोरस्थित तेस्रो डिभिजन कार्यालयमा त्यसबेला धेरै सहयोग गरेको जानकारहरु बताउँछन्। शक्तिखोरमा आवश्यक गाडी तथा मोटरसाइकलसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मा उनकै थियो।
स्रोत भन्छ, ‘त्यसैको फाइदा उठाएर दीपु यहाँसम्म आइपुगेका हुन्।’
माओवादी नेताहरुसँगको निकट सम्बन्धकै कारण उनी अहिलेसम्म चोरीको मुद्दामा पक्राउ पर्न सकेका थिएनन्। उनी पक्राउ परेपछि उनलाई छुटाउन भन्दै महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुर पुगेका माओवादीका केही नेता र सांसदबाट समेत उनलाई राजनीतिक रुपमा आड मिलेको पुष्टि हुन्छ।
प्रहरी स्रोतका अनुसार दीपुले 'केही समय गृह मन्त्रालयबाट अनाश्यक दुःख नदिन' भन्ने व्यहोराको पत्रसमेत बनाउन लगाएर लगेका थिए। स्रोतले नेपाल लाइभसँग भन्यो, ‘प्रहरीले पक्राउ गर्ने थाहा पाएपछि गृहमन्त्रीका एक सल्लाहकारमार्फत यस्तो पत्र बनाएर ल्याएको भन्ने अनुसन्धानबाट खुलेको छ। हामी अनुसन्धान गर्दैछौं।’
पौडेल पक्षको अगुवा कार्यकर्ता भेला शनिबार वीरगन्जमा क्षेत्रीय कार्यसमितिले आयोजना गरेको अगुवा कार्यकर्ता भेलामा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलसहित अन्य नेता सहभागी हुने भएका हुन्। पार्टी... २२ मिनेट पहिले
एल क्लासिको : परका दुई सहरको नजिकको भिडन्त रियल मड्रिड र बार्सिलोना परका सहर भए पनि भिडन्त एउटै सहरका दुई क्लबको भन्दा ज्यादा हुन्छ। जहाँ विश्वभरका फुटबलप्रेमी जोडिन्छन्। त्यह... ३२ मिनेट पहिले
बाँस्कोटाको दाबी-रकम लेनदेन गर्ने हिसाबले कसैसँग कुरा गरेको छैन ‘प्रतिवादीबाट सृजित कथित अडियो टेपमा कुनै सत्यता छैन,’ जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर गरेको मुद्दामा बाँस्कोटाले भनेका छन्, ‘रकम लेनद... ४४ मिनेट पहिले
पौडेल पक्षको अगुवा कार्यकर्ता भेला शनिबार वीरगन्जमा २२ मिनेट पहिले
एल क्लासिको : परका दुई सहरको नजिकको भिडन्त ३२ मिनेट पहिले
बाँस्कोटाको दाबी-रकम लेनदेन गर्ने हिसाबले कसैसँग कुरा गरेको छैन ४४ मिनेट पहिले